Ciyaartoy.com » DHAGAR QABAHA ISBOORTIGA HALAGA DHEEREEYO
DHAGAR QABAHA ISBOORTIGA HALAGA DHEEREEYO May 23, 2012 - ujawaab	ISboortiga waa dugsi weyn oo laga barto micnaha uu leeyahay adkeysiga si lagu kala ogaado qiimaha guusha iyo guul darrada ay kala leeyihiin,wa aalad lagu dhiso muruq, maskax iyo jir fiyow si loo helo xubin fir-fircoon oo diyaar u ah ka hor tagidda iyo diidmada waxa xun oo dib u dhac ku keeni karo bulshada toosan.
Bahda sboortiga Soomaaliya siiba midda London ama UK waxa laga dhex dareemayaa in ay ka jirto kala qeybsanaan aad u baaxad weyn oo meeshi si saraaxad leh loo wado hadli lahaa ayaa laga door biday in koox koox loo kala baxo keddibna weeb saadyada iyo tv yada la isu soo mariyo sarbeeb doqon magarato ah oo dhallinyarada si toos ah u kala fogeyso,dhaqanka sidaas ah waxa uu ka soo horjeeda oraahdi ahayd in sboortiga yahay waddo guud oo u xil saran loona maro wanaagga,hor marinta iyo isku xirka umadaha ku kale nool daafaha adduun weynaha.
ISboortiga sida hayadaha kale waxuu u baahan yahay in uu helo xeer ka ilaaliyo xad gudubka iyo jallaafada ay la raadinayaan kuwa ku can baxay dhagar qabayaasha oo si gaar ah ugu soo badanaayo goobaha iyo xarumaha loogu tala galay in dhalin yarada loogu qabto ciyar ama tartamo ujedada ka dambeysa tahay sidii ubadka looga dhisa lahaa jirka iyo maskaxda.
Waxaa halkaan lagu soo koobayaa seddex marxaladood uu sboortiga u leeyahay nolosha qofka.
1.dhanka caafimaadka:ISboortiga waxa uu si gaar ah u dhisaa jir cafimaad qabo,jirka caafimaad qabana waxa uu helaa maskax caafimaad qabto,umad faafiimaad qabtana waxa ay deg ded ku gaartaa nabad ku wada noolaasho,hor u mar iyo barwaaqo loo aayo.
2.Dhanka aadaabta:ISboortiga waxaa asal u ah meel isugu keenidda dad kala fikir iyo kala aragti duwan asagoo ku gubaabinaayo is tix gelin,is qadarin iyo qof waliba qofka kale xushmeeyo si loo helo is dhex gal iyo isu gar-gaarid.
3.Dhanka koriimada:ISboortiga waxa uu la kowsada ubadka inta ay yar yihiin,waxaa uu ku barbaariyaa dhaqanka fiican iyo ka fogaanshaha waxa xun oo ubadka mustaqbal kiisa ka lumin karo una hor seedi karo xabsi ama geeri.
ISboorti mideysan kaliya ayaa umadda wax loogu qaban karaa,haddii tafaraaruq la dhex dhigo waxaa hubaal ah in koox waliba ay meesheeda ku shiiqi doonto keddibna ay ceeb iyo weji gabax ugu dambeynti la hagoogan doonto, ayadoo intaas iyo in ka badan la garwaaqsan yahay ayaa haddana qaar ka mid ah dhallin yarada jecel sboortiga waxaa looga maara waayay in is naceebka ay ka door bidaan wadajir iyo wadahadal ku saleysan daacad nimo iyo is tixgelin walaalti nimo.
Ma tiro badno sababaha loo aanayn karo kala irdhowga iyo tafaraaruqa ka dhex jiro dhallin yarada sboortiga London oo si sahal ah dayac ku keeni karo hab wanaag u socodka iyo maamul toosan oo lagu abaabulo cayaaro mideysan, balse is af garad darrada waxaa aabe u ah:is aamin darro, dul qaad yari iyo samir la’aan,arrintaas oo dar-dar gelisay in kooxo kooxo loo kala safto keddibna hadallo xun-xun hawada la isu mariyo.
Waddan ajnabi ayaa qaxooti lagu yahay kii loo dhashayna cid uma maqno ceelna uma qodno dadkii wax u qaban lahayna waxay ka badin waayeen is qab-qabsi qiimo badneen,qof waliba shaqada iyo reerkiisa ayaa howl ugu filan,waxaa habboon in si gaar ah loo xasuusto in ugu dambeyntii dib saaxib loo noqon doono sidaas ayaa inta goori goor tahay waxaa lagula talinayaa inta yar oo is xag-xagashada dhex taal in ay joojiyaan hadalada dadka kala dilaayo una hoggansamaan talooyinka inta sama jecelka ah.
AW.Xussein Diiriye Afrax
« PreviousTartanka Koobka Horyaalka ee Jaaliyadda Soomaaliye?ed magaalada Jidda Sacuudi Carabiya	Next »Mogadishu oo Guushii Chelsae Looga Dabbaaldegay	Leave a Reply